Tụlee 7 Popular Music Sites ka Spotify
Azụmahịa nlereanya nke gụgharia music online ghọọ nnọọ viable na a myriad nke ụlọ ọrụ ndị kere mara na àgwà nyiwe site na nke ibudata ọkacha mmasị gị music. Ndị kasị ama ika na azụmahịa bụ enweghị obi abụọ, Spotify. N'ihi ogologo oge ha nwere ihe mgbochi ụfọdụ, dabere na gị Obodo ebe ma ọ bụ ugboro ole ị ike igwu a ụfọdụ track. N'ihi na nke ndị mgbochi, ọtụtụ ọrụ họọrọ anya n'ihi na ndị ọzọ uzo ozo ka afọ ju ha music mkpa. Ndị ọzọ nwere ike na-achọ nanị inyocha ndị ọzọ nhọrọ. N'agbanyeghị nke gị ihe mere, ndị na-esonụ ndepụta bụ a uto nke ihe na-echere gị si n'ebe na Internet.
Rdio VS Spotify Deezer VS Spotify 8tracks VS Spotify Soundcloud VS Spotify YouTube VS Spotify Myspace VS Spotify Grooveshark VS Spotify TunesGo - download Spotify na gụgharia music free
Na ihe karịrị nde 20 songs na dị 152 mba, Rdio na-eme bukwanu traction na online music gụgharia azụmahịa.
Ha na-ekwe ka ị n'ihu iwekota ọrụ na Facebook iji n'ihi na gị na enyi na-eso onye ọ bụla ọzọ music amasị.
Arọ adiana bụ a mma na-enye gị ohere ịhụ ihe Rdio obodo-ege ntị.
Mgbe ị na-amalite na-eso ndị ọrụ ndị ọzọ, ị ga-achọpụta ha wepụtara idak albums ha na e na-ege ntị ma ọ bụ ndị ha na-azoputa. A bụ ihe ọzọ nifty mma ka-enyere gị aka ịchọpụta ọzọ music.
Rdio dị ka Deezer akwado fọrọ nke nta niile nyiwe.
Dị ka Spotify ọ bụ ihe advertisement na-akwado ọrụ, ma ọ bụghị na-akparaghị ókè, nke mere na ike na-adọta onye ọ bụla.
Ọzọ ọzọ ka Spotify meworo ka bukwanu leeway na Europe bụ French music gụgharia saịtị akpọ Deezer. Na nnukwu katalọgụ nke tracks dị ka nta ọ bụla ná mba ụwa, nke a music gụgharia ọrụ bụ oké contender ka Spotify.
Ha na-akwado nta ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche n'elu ikpo okwu, otú ikwe maka bukwanu nnwere onwe ebe na otú otu iyi onye music.
Na ha nwere Smart Radio atụmatụ na customizes gị na-ege ntị ahụmahụ dị ka gị uto ke music na ọ ga-atụ aro ọhụrụ tracks i nwere ike na-enwe, dị nnọọ elu karịa karịa Spotify na-eme otú ahụ.
Dị nnọọ ka Grooveshark, ị nwere ike abanye kpọmkwem na gị email, Google Plus ma ọ bụ Facebook.
Dị ka ya na-ama Spotify ọ na-adịghị enye tracks si beatles ma ọ bụ Dugara Zeppelin.
Deezer bụ adịghị ke United States.
Ọ dịghị ọrụ redio atụmatụ dị ka Spotify na saịtị ndị ọzọ.
Nke a na saịtị bụ ihe kasị pụrụ iche nke niile nke ndị ọzọ, zọpụta ikekwe Soundcloud, n'ihi na a na saịtị utilizes mkpado gaa na ma ikpokọta dị iche iche music ekwekọghị ma ọ bụrụ na onye na-achọ na-achọpụta ọhụrụ music ma ọ bụ nanị ike elu listi ọkpụkpọ. Ị nwere ike ịpụ na-ege ntị a tupu kpebisiri ike playlist ma ọ bụ mepụta otu. I nwekwara ike bulie dị ihe ọnọdụ ma ọ bụ mmetụta, dị ka obi ụtọ, mwute ma ọ bụ ihunanya ma ọ bụ dị ka themes.
Otu nke oké ihe banyere 8tracks bụ na ị nwere ike jikọọ na ndị ọzọ mmadụ site music site chọpụtara ha listi ọkpụkpọ ma ọ bụ site n'ịza ajụjụ na ha.
Ọ dịghị mgbasa ozi interrupting na music ahụmahụ.
Ị nwere ike ikwu n'elu ọtụtụ tracks n'ime onye ọ bụla playlist.
Adịghị nwere otu echiche nke na-elekọta mmadụ obodo dị ka Spotify, n'ihi na ị bụghị ịkọrọ gị playlist na ndị enyi gị n'èzí nke saịtị.
Soundcloud nleghari ka hipster ìgwè mmadụ n'ihi na ọ na-enye ohere maka anonymity nakwa dị ka nhọrọ ịkọrọ gị music na ụwa.
Sleek na minimalistic interface.
Great obodo, na ọtụtụ iche iche na audiophiles na-raara nye music.
Ọ timed comment usoro ebe ọrụ nwere ike atụle akụkụ ụfọdụ, lyrics ma ọ bụ gafere na onye ọ bụla song n'oge kwesịrị ekwesị oge.
A oké ihe atụ nke otú dị iche iche Soundcloud bụ Spotify bụ mgbe Amy Winehouse nwụrụ na 2011. Esisịt ini ke, Mia tọhapụrụ a ụtụ track na naanị hụrụ na Soundcloud.
Ọ bụrụ na ị na-hankering mbụ music, mgbe ahụ, nke a bụ gị n'elu ikpo okwu; ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-dị nnọọ na-achọ ụfọdụ ndị ọhụrụ music mgbe ahụ kwesịrị ekwesị, Atiya ka ntị gị achọpụta ọhụrụ gị mmasị music.
Soundcloud bụkwa maka Android mobile igwe ma ọ bụ iPhones, na nwere oké nkwado.
Ị nwere ike iwekota gị SoundCloud ege ntị ahụmahụ n'ime gị Facebook akaụntụ, ikwe enyi gị ịhụ ihe ị na-ege ntị, ma ọ bụ ka ha na-eso gị music amasị.
Ị nwere ike abanye na na gị Google na Facebook akaụntụ, Spotify naanị-enye gị ohere abanye na na gị FB akaụntụ.
The minimalist imewe nwere ike mmenyenjo ụfọdụ.
Ị nwere ike mfe imepụta egwu ọkpụkpọ nke ọkacha mmasị gị artists site na-ede ihe aha ha na search nhọrọ. Ọ na-nwere youtube si nchekwa data, nke bụ nnukwu na mgbe nile na-eto eto.
Ọ bụ ihe magburu onwe na ọtọ ọzọ ka Spotify chọrọ dịghị log-na ma ọ bụ downloads.
N'adịghị ka Spotify, ọhụrụ artists Ị nwere ike bulite ruo 2 awa nke ọdịyo n'efu na soundcloud.
Soundcloud ọzọ bụ ịnakwere nke remixes na ndị ọzọ na ihe, nke na Spotify nwere ike kwere na Spotify.
Ọ bụghị dị ka aesthetically ụtọ dị ka ụfọdụ nke ọzọ gụgharia ọrụ, gụnyere Spotify.
Ọ na-arụ ọrụ ọma na Internet na iOS na ụfọdụ mgbochi.
The search ọrụ bụ akpali nnọọ mmasị na-enye ohere maka hashtag nkwado, si otú a mee ka ọ dị mfe na-achọpụta ọhụrụ music na ọdịnaya.
Social redio ngwa dị na iOS. Na ya ọrụ nwere ike bulite animated gifs na-enuba ha na-elekọta redio si Myspace, ikwe n'ihi na ihe discoverability.
Ọ na-adịghị ná n'elu-notch artists ebe ọtụtụ nke aka aha ndị dịtụ-amaghị ama.
Of niile asọmpi na-Spotify, Grooveshark kemgbe ihe ndị kasị mara ama dị ka nke ọma dị ka ndị a yiri nnọọ n'elu ikpo okwu. Otú o sina dị, e nwere nnukwu ihe dị iche. Grooveshark adịghị achọ gị download ọ bụla software iji enuba music, ma ọ bụ na-ha nlereanya dabeere na aural mgbasa ozi.
Ọzọkwa, Grooveshark bụkwa obodo dabeere dị ka a na Spotify mgbe ohere n'ihi na ihe nzuzo.
Ọ bụghị naanị na ị pụrụ ige ntị ọkacha mmasị gị music, ma ị nwere ike họrọ redio ụgbọ ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ 'listi ọkpụkpọ nakwa dị ka na-ekere òkè gị onwe gị.
Grooveshark kwekọkwara mobile nyiwe.
The homepage nwere ike ịbụ a bit clunky tụnyere Spotify.
TunesGo - download Spotify na gụgharia music free
> Resource> Spotify> Tụlee top 7 Music na saịtị na Spotify